Pattaya ~ Journey-Assist - torapasika Pattaya. Mahaliana ao Pattaya
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya
Pattaya no malaza amin'ny resorts ao amin'ny tanibe Thailand. Ny halaviran'ny Bangkok dia 147 km (tsy mihoatra ny 2 ora amin'ny fiantsonan'ny seranam-piaramanidina Suvarnabum) ity halavirana ity. Amin'ny fiteny Thai, ny teny hoe "pattaya" dia manondro ny rivotra izay mitsoka mankany avaratra atsinanana amin'ny fotoanan'ny orana.
Sarintany Pattaya amin'ny teny rosiana
Mahaliana ao Pattaya. zavatra hita
Tiffany Show any Pattaya. Overview
Io no anaran'ireo iray amin'ireo fampisehoana transitite malaza eran-tany natao tany Pattaya. Ity dia tantara ara-tantara voalohany amin'ny fampisehoana any Azia Atsimo Atsinanana. Efa ho 40 taona izay no lasa hatramin'ny fivoriana voalohany. Ny Tiffany Show dia atao ao amin'ny efitrano iray misy fitaovana maoderina sy fitaovana maoderina, izay mipetraka ireo mpijery 1 000. Nahitana mpanakanto mandalo mihoatra ny 100.
Toa tsara tarehy ilay fampisehoana. Amin'izany fomba izany dia tsy tokony hafangaro amin'ny fampisehoana olon-dehibe, izay atao koa any Pattaya (Walking Street sy ny toerana hafa). Tiffany Show dia fampisehoana hatsarana amin'ny fandraisana anjaran'ny mpanakanto transitite matihanina. Tsy misy ny haratsiam-pitondran-tena ao, na dia ny zaza dia 12 taona monja aza no avela.
Tamin'ny taona 2001, ny fampisehoana Tiffany aza dia nahazo toerana faha-4 teo amin'ny laharana fampisehoana malaza eran'izao tontolo izao, resy tamin'ny fampisehoana Paris Moulin Rouge sy fampisehoana 2 Las Vegas.
Ny fampisehoana Tiffany dia tanterahina isan'andro.
Fisehoana telo no atao amin'ny andro: 18.00. 19.30. 21.00 p.m.
Ny faharetan'ny fampisehoana dia 75 ka hatramin'ny 90 minitra.
Ny zaza latsaky ny 12 taona dia TSY MISY AZY. Na dia tsy misy mijery manokana aza.
Alcazar Cabaret Show (Alcazar Cabaret Pattaya)
Ny famerenam-panoherana alcazar ho any Pattaya
Alcazar dia fampisehoana transitite malaza eran-tany. Amin'ny maha-mpifaninana mivantana an'i Tiffany dia tsy ambany noho ny farany i Alcazar. Ny mpanakanto matihanina ihany koa dia mandray anjara amin'ny Alcazar, mampiasa mozika avo lenta sy fiantraikan'ny jiro mahafinaritra.
Ny fandaharana dia misy ireo hira sy dihy nentim-paharazana sy maoderina. Ireo mpandray anjara dia miseho amin'ny fitafiana manaitra.
Eo anelanelan'i Alcazar sy Tiffany dia sarotra ny misafidy azy. Saingy afaka mamangy ireo seho roa ianao - mendrika izany!
Sahala amin'i Tiffany, voarara ny maka ny sary amin'ny Alcazar, ary rehefa vita io dia hivoaka eny an-dalambe ny mpanakanto izay ahafahan'izy rehetra maka sary miaraka aminy, mandoa vola amin'izany.
Vidiny ho an'ny seho Alcazar
Vidin'ny fitsidihana an'i Alcazar - avy 600 до 900 baht raha mandinika ny famindrana. Ny vidiny dia miankina amin'ny toerana voafantina.
Lalam-pivoriana ho an'ny fampisehoana Alcazar
Tsara kokoa ny mandray avy amin'ireo mpaninjara ao an-tanàna, fa tsy ao Alcazar mihitsy. Ireo tapakila izay ao Alcazar 800 baht (ny laharana ambony amin'ny faritra VIP, ny mpaninjara dia mety mitentina 650 Baht.
Ny tapakila any Pattaya dia amidy na aiza na aiza - eo amin'ny toerana mitovy amin'ny tapakila Tiffany.
Mba maka sary miaraka amin'ireo artista aorian'ny fampisehoana dia mila mandoa vola ianao 100 Baht.
Alcazar seho fanokafana
Tontosa ny fanatanterahana DAILY in:
Ny faharetan'ny fampisehoana dia eo amin'ny 70 minitra (1 ora sy 10 minitra)
Ahoana ny fomba hankanesanao amin'ny fampisehoana Alcazar
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny vidin'ny tapakila dia ahitana famindrana, saingy azo atao ny maka taxi. Sahala amin'ilay tranobe Tiffany dia hita ao amin'ny làlana Pattaya faha-2 ny trano Alcazar Show.
Address: 9 ที่ 78 14/2 Thanon Pattaya Sai 20150, Distrika Bang Lamung, Chon Buri XNUMX, Thailandy
telefaonina: + 66 38 422 220
Tranonkala ofisialy http://www.alcazarthailand.com/en/site/index
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/WbAYiTeyp9x9QqGX7
Aiza no hitadiavana seho olon-dehibe any Pattaya
Ny fampisehoana olon-dehibe dia atao any amin'ny klioba manerana an'i Pattaya.
Tsy ilaina ny mitady manokana amin'ireo toerana ireo - afaka mandeha eny an-dalambe fotsiny ianao amin'ny hariva, voalohany indrindra - miaraka Nandeha an-dalambe, ary azo antoka fa hihaona amin'ny maro tout ianao amin'ny tolotra hitsidihana ireo seho toy izao.
Raha ny fahazoana fahalalana dia mampiasa sary, sary sy famaritana lahatsoratra ho an'ny fampisehoana, anisan'izany amin'ny teny Rosiana. Mila mamaky sy mandinika tsara ianao raha tsy izany dia mety ho tonga amin'ny fampisehoana fa tianao ny hanatrika. Amin'ny fomba, araka ny lalàna, ny fampisehoana olon-dehibe dia tsy ara-dalàna, na dia amin'ny fomba fanao aza dia manjary jamba ny mason'ity rehetra ity.
(Mpanaraka ny fandehanana an-tongotra any Phuket - Bangla Road)
Go-Go Bars ao Pattaya (Go-Go)
Ny andrim-panjakana malaza indrindra amin'ity karazana ity dia ireo antsoina hoe Go-Go bar (Go-Go). Ny anarana hoe Go-Go no anaran'ilay fomba fandihizana ho an'ireo andrim-panjakana karazana.
Ao amin'ny Pattaya Go-Go, be dia be ny bara ary malaza indrindra amin'ny lehilahy mitady fialamboly toy izany.
Vidiny amin'ny Go-Go Bars
Ny fidirana amin'ny fitsangantsanganana Go-Go matetika dia maimaim-poana. Ny loharanon'ny fidiram-bolam-panjakana dia ny fivarotana zava-pisotro amin'ny vidiny miakatra. Ohatra, ny tavoahangy rano tsotra indrindra amin'ny barzo dia mitentina 100 baht, ary labiera amin'ny 1500 ka hatramin'ny 500 baht. Ary amin'ny fomba, tena mila mividy fisotro ho an'ny tenanao ianao. Ireo no toe-javatra.
Ny akany mihitsy dia efitrano afovoany ary podium misy refy misy 2 ka hatramin'ny 6 metatra (+/-). Manodidina ny podium ny latabatra ho an'ny mpitsidika. Ao afovoan'ilay podium, matetika ny fametahana basy izay mandihy ny zazavavy miboridana miboridana (ao anaty trano sasany ary tsy voafehy tanteraka). Ny zazavavy sasany dia afaka manao dihy eo amin'ny latabatry ny mpitsidika.
Inona no mitranga ao amin'ny bara mandeha-mandeha
Ny tena fototry ny zava-mitranga dia: ankizivavy maromaro mandeha any amin'ny podium isaky ny 20 minitra, manao faribolana tsy voafehy eo amin'ny podium, mampiseho ireo mpitsidika mankany amin'ilay toeram-pananganana. Nandihy nandritra ny fotoana kelikely izy ireo, ary taorian'ny 20 minitra dia nosoloana vondron'ny zazavavy manaraka.
Izany rehetra izany dia arahi-maso ny mpiasa manokana amin'ny trano Mamasan (matetika vehivavy antitra).
Ny mpitsidika tsirairay dia afaka misafidy tovovavy tiany, manasa azy eo amin'ny latabany ary manolotra azy ilay antsoina hoe ladydrink (mividy zava-pisotro ho an'ny zazavavy dia tsy ilaina, fa fepetra takiana mba hiresaka aminy). Amin’ny fizotrany fifandraisana, raha misy ankizivavy te manaja azy ka tsy manadino, dia afaka mitondra azy ny mpitsidika miaraka aminy.
Ho fanondroana. Ny serivisy ho an'ny zazavavy dia avy amin'ny 2000 baht. (Izany no vidiny farany ambany, ary raha betsaka ny mpanjifa, dia azo antoka kokoa izany.
Mitranga izany fa raha vao miditra amin'ny barina toy izany ianao, avy hatrany dia misy tovovavy iray tonga ary mangataka fehin-kibo. Ary anjaranao manokana ny mitsabo azy na hazavao tsara fa te hahita ireo zazavavy hafa aloha.
Zava-dehibe ihany koa ny hahafantatra fa raha te-haka vehivavy ianao amin'ny Go-Go bar, dia mila mandoa vola ny Bar Fine (Bar Fine - tsara ho an'ny bara). Tamin'ny taona 2019, Bar Fine dia nahitana eo anelanelan'ny 500 sy 1000 baht amin'ny ankamaroan'ny go-go bar ao Pattaya.
Ho an'ireo mpivady niforona manerana an'i Pattaya dia afaka mahita ny fampandrenesana ny fanofaan-trano mandritra ny adiny iray ianao.
Fampisehoana Ping-Pong ao Pattaya (Ping-Pong Show)
Fampisehoana ping pong na Sex show na Seho fax na Fampisehoana Pussy - Fampisehoana isan-karazany ho an'ny olon-dehibe ao Pattaya, ao anatin'izany ny trika isan-karazany miaraka amin'ny taovam-pananahana (indrindra ny vehivavy) - ohatra, "tifitra" misy baolina ho an'ny tenisy latabatra, fandrehitra sigara iray, esory ny rojo vy amin'ny gony.
Amin'ny fidirana amin'ireo fananganana toy izany dia ho hitanao foana ireo tout miaraka amin'ny dokam-barotra izay tsy mamela fisalasalana momba ny karazam-panorenana izay hanasana anao.
Amin'ireo seho ireo dia tsy mahafinaritra ny olona ny fahitana, izany hoe, azo lazaina fa am-panajana izy.
Matetika i Barker no nilaza avy hatrany fa ny dimy minitra voalohany azonao jerena maimaim-poana, dia raha tsy tianao izany dia afaka miala fotsiny ianao (ary raha tianao dia andoao ary jerena bebe kokoa).
Marina izany, ka raha te-hahita fotsiny hoe manao ahoana ny fampisehoana toy izany ianao, ajanony fotsiny mandritra ny minitra vitsy ary hivoahana. Mandritra izany fotoana izany, voarara mafy ny maka sary mandritra ny famelabelarana.
Mazava ho azy fa ny hevitra toy izany dia tsy natao ho an'ny ankizy. Na izany aza, ireo mpandray anjara indraindray dia manao trikà mahagaga tokoa.
Fivarotan-tena. Prostitutes any Pattaya
Amin'ny fomba ofisialy, voarara ny fivarotan-tena any Thailand. Raha ny tena izy dia mazàna. Araka ny antontan'isa any Thailandy, ankizivavy maherin'ny iray tapitrisa ary folo lahy latsaka kely kokoa no tafiditra amin'ity faritra ity. Tsara homarihina fa 95% tamin'io isa io no nanao an-tsitrapo an-tsitrapo.
Aiza ary amin'ny firy
Ny toerana malaza indrindra ao Pattaya izay misy fandrika an'ny mpivaro-tena dia Beach Road, izay nodiavin'i Walking Street.
Ireo nanapa-kevitra ny hanofa mpivarotra mpivaro-tena iray ao Pattaya dia nasaina ho tonga amin'ny Beach Road tsy mihoatra ny enina hariva, satria amin'izao fotoana izao dia mihena ny vidiny ary misy safidy hafa kokoa. Mihena ny vidin'entana satria zazavavy maro no vonona hanome fihenam-bidy, amin'ny fanantenana ny hisintonana "hiasa" aorian'izay.
Prices sy fitsipika
Ny vidin'ny serivisy dia mety ho samy hafa, ary miankina amin'ny fitondran-tenanao sy ny fahalalanao. Ary koa ny tolotra omena dia zaraina ara-dalàna:
fotoana fohy - amin'ity tranga ity dia voafetra adiny iray ianao. Lisitry ny vidiny manomboka amin'ny 500 Baht.
fotoana ela - dia miankina amin'ny fomba ekenao izany. Fa mazàna, alina iray ihany io.
Fa na izany na tsy izany, dia atoro ny hanazava ny zavatra rehetra mba hisorohana ny tsy fifankahazoana.
Ho an'ireo mpivady niforona manerana an'i Pattaya, ary amin'ity làlana ity, indrindra indrindra dia afaka mahita doka momba ny fanofa trano mandritra ny adiny iray ianao, raha toa ka tsy te hitondra ilay tovovavy ho ao amin'ny efitranonao ianao.
Tandremo - tsy dia misy tranga tsy fahita firy rehefa nifoha tamin'ny fandroba ny maraina ireo “client”. ny tranga amin'ny halatra kely dia matetika ny fangalarana ary izany dia atody fa ny pilina fandiana no ampiana amin'ny fisotroanao. Zavatra samy hafa no mitranga, koa mitandrema.
Ary ny zavatra farany: tadidio fa ankoatra ny ankizivavy, ny transvestites (Ladyboy) mivarotra serivisy toa izany dia azo jerena eny an-dalamben'i Pattaya ihany koa. Tandremo mitandrina .... ny mahamenatra.
Pattaya dia antsoina hoe tanànan'ny ota eto amin'izao tontolo izao, ary isaorana dia tokony homena amin'ny fandehanana an-tongotra Walking, debachery malaza manerantany.
Izy io no toerana iainana voalohany amin'ny alina. Amin'ny andro an-dàlam-pandehanana, ny Lalana mandeha tsy an-dàlambe dia tsy mitovy amin'ny lalana hafa any Pattaya.
Mandeha amin'ny hariva
Na izany aza, amin'ny alina, miova tampoka ny toe-javatra: jiro ny jiro, ny mpizahatany tonga eto, ny mozika mafy dia mafy, ny karazana fampisehoana rehetra dia voalamina amin'ny sisin-dàlana. Misy fifangaroana be loatra, trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, klioba strip, brothels.
Ny lalana mandeha amin'ny alina
Na izany aza, misy hariva tonga amin'ny olona miaraka amin'ny zaza. Eny tokoa, ALOHA ny zava-drehetra tsy tian'izy ireo ho hita hatreto, dia eo ivelan'ny rindrin'ny trano tsirairay, ary raha amidy marobe izay misokatra amin'ny haizina, mahagaga fa mivarotra kilalao - kilalao ho an'ny ankizy fa tsy olon-dehibe.
Ny zava-mitranga amin'ny dia mandeha an-dalambe
Isan'andro hatramin'ny 19.00, ny Lalana Mandeha dia iray amin'ny arabe mahazatra ao Pattaya, fa aorian'ny 19.00 dia lasa mpandeha an-tongotra manontolo izy io. Eto amin'ity lalana ity ary mifanakaiky dia misy toerana marobe 18+. isan-karazany ny antsoina hoe Go-Go trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, disko, fantsom-pokontany ary andrim-panjakana hafa manolotra fialamboly ho an'ny olon-dehibe
Ho fanampin'ireo fananganana ireo, ny arabe ny toerana dia toerana manokana, ary eto amin'ity fotoana ity dia misy hatrany ny fivarotan-tena maro - ankizivavy, transvestita ary lahy lahy manana orientation tsy mahazatra.
(Afaka mahita bebe kokoa momba izany eto ianao)
isaky ny dingana eto, dia manolotra hijery hijery seho isankarazany, ohatra, ahitana ny firaisana ara-nofo eo amin'ireo mpandray anjara, na fampisehoana voadio kokoa, dia nanasa.
Fisehoana firaisana ara-nofo eny an-dalambe (Go Go)
Ny fampisehoana toy izany dia misy trika isan-karazany miaraka amin'ny taovam-pananahana (indrindra ny vehivavy) - ohatra, "tifitra" misy baolina ho an'ny tenisy latabatra, fandrehitra sigara, manaisotra rojo vy iray avy amin'ny toerana iray akaiky.
Ireo fahitana ireo dia tsy mahafinaritra ho an'ny rehetra, izany hoe, azo lazaina fa am-boninahitra izy ireo. Fa raha ny fitsarana amin'ny hoe ny fangatahan'ny fitsidihana an'ity arabe ity dia tsy manjavona, dia amateurs foana aho.
(Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny fampisehoana toy izany dia hita eto)
Fomba entina manatrika fampisehoana firaisana
Marina izany, ka raha te-hahita fotsiny hoe manao ahoana ny fampisehoana toy izany ianao, ajanony fotsiny mandritra ny minitra vitsy ary hivoahana. Nandritra izany fotoana izany dia voarara mafy ny fakana sary mandritra ny fampisehoana!
Amin'ny orinasa maro toy izany dia afaka ny ho afaka tanteraka ianao, ary mahazo tombony izy ireo fa ny vokatra ao amin'ny barin'ny andrim-panjakana dia avo dimy heny noho ny vidin'ny mahazatra.
Amin'ny bar sasantsasany, satria mihantsy famantarana ny "fakam-panahy" milaza fa ny vodka dia maimaimpoana tanteraka. Matetika izy ireo dia mifantoka amin'ireo mpizahatany miteny rosianina. Ny dikan'izany, farafaharatsiny, fa ireo famantarana momba ny vodka maimaim-poana dia amin'ny teny Rosiana.
Aiza no misy ny Walking Street? Ahoana no hahatongavana any
Fidirana amin'ny Lalana an-tongotra
Ny lalana mandeha dia mipetraka eo afovoan'i Pattaya. Tsy hay ny mandeha mandalo. Izay mety ho eo an-toerana dia hanondro anao amin'ny lalana.
Afaka mandehandeha eny amin'ny promenade ao afovoan-tanàna manakaiky ny havoana misy litera mena PATTAYA ianao. very na sendra tsy azo atao.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/yEMxzUgB9craJyRaA
Tsenan-tsoroka any Pattaya
Pattaya Fijery momba ny tsena
Ireo izay tsy nitsidika tsena mitsingevana teo aloha tany Thailand (any Bangkok sy ny tanàna hafa) dia mety ho liana amin'ny zavatra toy izany any Pattaya. Na izany aza, ankehitriny izy dia tsy azo antsoina intsony hoe bazaar tena izy. Fialamboly ho an'ny mpizahatany fotsiny. Rehefa dinihina tokoa, mpividy fotsiny amin'ity tsena ity dia mpizahatany ihany, ary ny souvenir ary ny sakafo haingana Thai ihany no omena amin'ny entana. Na izany aza, raha ny tsy fisian'ny fahafahana mitsidika iray hafa, ka "marina" feno baona mitsingevana, afaka mandeha eto ianao. Aza hadino fotsiny fa ny vidin'ny fihenam-bidy eto dia avo be: amin'ny tsenan'i Pattaya mahazatra sy any amin'ny fivarotana dia azonao atao ny mividy mitovy amin'ireo zavatra ireo.
Inona no ao an-tsena mitsingevana any Pattaya
Nisokatra ny tsena tamin'ny 2008 io, ary efa nitaky ny mpizahatany.
Mizara efatra ny trano fivarotana varotra: Avaratra, Avaratra, atsimo ary Centre an'ny firenena. Ary atolotry ny vokatra avy any amin'ireny faritra ireny izy ireo.
Famoronana asa tanana maro, souvenir tany am-boalohany, fanafody miorina amin'ny akora voajanahary.
Milalao koa ny mozika eto, ny ady totohondry amin'ny rano no atao, ny matso ary na dia ny hazakazaka amin'ny sambo aza.
Eo amin'ny faritry ny tsena dia misy koa ny Tempolin'i God Ganesha kely.
Rafitra mitsingevana any Pattaya (tsenan-drano)
Ao amin'ny sary etsy ambony dia ahitanao ny lalan'ny sambo.
Ny tsy fatiantoka ny tsenan'ny mitsingevana ao Pattaya
Rano maloto. Ny olona manome lanja ny fahadiovana sy ny fahadiovana no tsara kokoa eto.
Raha ny marina, tsy tsena mitsingevana nentim-paharazana io fa natao mahasarika fizahantany natao ho azy.
Feno olona. Indrindra fa betsaka ny olona any Chine.
Ny vidin'ny vokatra atolotra dia salanisa avo roa heny noho ny toerana rehetra.
Ny karazan'entana entin'ny entana natolotra dia tsy mitovy amin'ny karazam-barotra any Pattaya
Ny vidin'ny fitsidihana ny tsena mitsingevana any Pattaya
Malalaka ny fidirana eto, fa nanomboka tamin'ny 2012 dia nandoa sarany izy ireo 200 baht (na dia misy ny andro tsy mitovy, fety, ohatra, rehefa mety mitentina 400 na 800 baht aza ny fidirana).
200 Baht dia ho an'ny fidirana mahazatra amin'ny tsena an-tongotra an-tongotra.
Milomano eny an-tsena amin'ny sambo tsy maintsy andoavana izany 600 na 800 baht, miankina amin'ny karazana sambo tianao.
Ny vidiny eny an-tsena dia natao manokana ho an'ny mpizahatany ihany, noho izany dia be loatra izy ireo.
Tsara homarihina fa ny tsena dia malaza indrindra amin'ny mponin'i Chine.
Aiza sy ahoana ny lalana mankany amin'ny tsenan'ny mitsingevana ao Pattaya
Ity tsena ity dia eo akaikin'ny lalana Sukhumvit ary 10 km miala ao afovoan'i Pattaya. Afaka tonga amin'ny fiara fitateram-bahoaka ianao, izay mandeha in-5 isan'andro ao Pattaya (ny bahana dia 30 baht).
Address: 12 451/304 Sukhumvit Rd, Pattaya City, Distrika Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailandy
telefaonina: + 66 88 444 7777
Mode mode: manomboka amin'ny 9.00 a.m ka hatramin'ny 20.00 p.m. isan'andro
Tranonkala ofisialy https://www.pattayafloatingmarket.com/
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //g.page/pattayafloatingmarket-pfm4? mizara
Hita ao afovoan'i Pattaya. Hita miharihary amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny soratra ao anaty taratasy lehibe Pattaya City, izay napetraka eo amin'ny havoana Pratamnak. Eto ny mpizahatany sy ny mponina eto an-toerana dia maniry ny handamina sary fakana sary. Na izany aza, tsy izany irery no antony tokony hiheverana ny Pattaya City Sign izay tsara indrindra amin'ny fandehanan'i Pattaya. Rehefa dinihina tokoa, dia ahitana fomba fijery mahafinaritra ao amin'ny Walking Street, Bali Hai pier, Pattaya sy Jomtien torapasika, Pattaya Bay izay manana endrika endrikendrika. Any ambony rihana dia ny Tempolin'i Wat Kho Phra Bat ary tsangambato an'ny Prince Jumborn. Sehatra iray lehibe iray ity dia sehatra fijerena, izay manampy mba hialana amin'ny vahoaka be.
Ny famerenana 360g dia azo atao ao amin'ny rohy: https://ths.li/dlHj2
Tranon-tsolika Water Park Carton Network (Amazone Cartoon Network)
Ny fijerena ny tambajotra Carton Amazon ao Pattaya
Io zaridaina rano iray hafa ao Pattaya, namboarina tamin'ny taona 2014 niaraka tamin'ny vola avy amin'ny iray amin'ireo fahitalavitra malaza indrindra any Thailand, manampahaizana manokana momba ny sary miaina.
Raha oharina amin'ny lehibe indrindra any Thailandy renirano Ramayana, Kely kokoa ity zaridaina ity fa araka ny hevitra maro dia mora kokoa. Manokana fotoana kely kokoa amin'ny famindrana eo anelanelan'ny lalana sy zona.
Ny faritany midadasika an'ity andrim-panjakana ity dia mizara ho faritra maromaro. Ny faritra tsirairay dia misy mahasarika rano amin'ny haavon'ny fahasarotana samihafa, manomboka amin'ny kely ka hatrany amin'ny farany.
Tsy manam-pahasahiranana ny ray aman-dreny - ny ankizy tsy dia lavitra noho ny 140cm dia tsy avela miditra amin'ny fitaratra ilay olon-dehibe. Fa hampitandremana isika fa ho an'ireo ankizy latsaky ny 4-5 taona dia tsy misy fialamboly be loatra ny rano amin'ny taonany. Tsy maintsy ho afa-po amin'ny dihy miaraka amin'ireo mpanao sary mihetsika izy ireo.
Marihina fa ity valan-javaboary ity dia ahitana faritra manokana hisitrika sy fanatanjahan-tena hafa.
Amin'ny fitambarany, Amazone dia manana zona 10, ka ao anatin'izany ny mahasarika mihoatra ny 25. Ny zaridaina rano dia manolotra fialamboly mivantana sy haino aman-jery amin'ny alàlan'ny teknolojia farany an'ny haino aman-jery farany.
Vidiny ao amin'ny Valan-javaboary Carton Pattaya
Login - 1290 baht isan'andro (2019-2020)
Login - 990 baht ao anatin'ny antsasaky ny andro.
Fidirana amin'ny pizza roa + sy siny feno Pepsi roa - 2500 baht
Any amin'ny masoivoho fitetezam-paritany, ny fitsangatsanganana amin'ity zaridainan'ny rano ity 800 baht isaky ny olon-dehibe ary avy 700 fiainana andavanandro ho an'ny zaza hatramin'ny 140cm. Ny vidiny koa dia misy serivisy fanakatonana sy ny hidin-trano ho an'ny zavatra (biraon'ny ankavia).
Kabinetra fitehirizana - 380 baht (raha tonga amin'ny anao manokana). 100 baht amin'ireo 380 miverina alohan'ny handehananao.
Efitra fanakanana mihidy ho an'ny Silamo (ho an'ny miozolomana)
Rano 0.5l - 30 baht. Cola 0.5l - 90 baht.
Ny fahandro Thailandey 149 baht isaky ny lovia
Ny fahandro eropeana dia 200 baht isaky ny lovia
Tsy afaka mitondra rano sy sakafo miaraka aminao ianao. eo am-baravarana, esory daholo ny zava-drehetra ary arotsany, na avela ao anaty kabinetra manokana, izay manam-bola ihany koa.
Aiza no misy. Ahoana no hahatongavana any. Fomba fandidiana
Tranonkala ofisialy - https: //www.cartoonnetworkamazone.com/
Fomba fandidiana. Isan'andro manomboka amin'ny 10.00 a.m ka hatramin'ny 18.00 p.m.
Ny fitsangatsanganana amin'ity valan-javaboary ity dia mahasoa kokoa amin'ny fividianana noho ny mandeha amin'ny anao manokana. Ny fitsangatsanganana dia ahitana ny famindrana dia misy dia mandritra ny fitsangatsanganana, fidirana amin'ny zaridaina ary hidin-trano amin'ny fitehirizana zavatra. Ary mitentina 800 baht, mifanohitra amin'ny mahazatra 990 baht ho an'ny fidirana ary 280 ho an'ny locker amin'ny fitahirizana zavatra.
Cartoon Network Amazone no misy ao Bangsaray, lalana 20 minitra miala an'i Pattaya.
Address: 8 ที่ 888 20250 Sukhumvit Rd, Na Chom Thian, Distrika Sattahip, Chon Buri XNUMX, Thailandy
Telefaona +66 (0) 33 004 999
Sariho amin'ny sari-tany - https://goo.gl/maps/Jm5rjTZr74M2
Ny tempoly Wat yanasangwararam (Wat yansangwararam). Tempolin'i Wat Yan
Famaritana ny tempolin'i Wat Yansangwararam. Tempolin'i Wat Yan
Vitsy kely ny tsangambato momba ny kolontsaina ao Pattaya sy ireo manodidina azy. Ity tanàna ity dia feno amin'ny sehatry ny fialamboly. Vitsy koa ny tempoly tsara tarehy sy manan-danja eto, ary ny iray aza i Wat Yan. Izy io dia aseho amin'ny endrika am-boalohany. Na izany aza dia tsy azo antsoina hoe antitra, naorina izy io tamin'ny 1976.
Ho fanampin'ny fisehoany tsy mahazatra, ity tempoly ity dia malaza amin'ny zava-misy fa misy sombin-tsoratra amin'ny tendon'ny Buddha, ary amin'ny tranobe mitokana eo anilany dia misy tsipika sisa tavela amin'ny tongotry ny Buddha. Raha ny fandehany dia ny fitsidihana ireo toerana telo ireo no fandaharana fitsangatsanganana amin'ity tempoly ity.
Saingy raha ny marina, ity tranobain'ity tempoly ity dia afaka manome betsaka bebe kokoa, noho izany, manoro hevitra mafy izahay hitsidika ity tranobe ity irery. Ary farafaharatsiny mba manantena ny handany telo ora eo.
Ny teti-bolan'ny tempolin'i Wat Yanasangwararam (Wat Yang)
Ao amin'ny fiteny Thai ny tetikady, saingy hita avy aminy fa lehibe kokoa ny saro-pantarina noho ny ahafahany mitety ny antsasak'adiny.
Misy chedi (stupas), lehibe sy kely, valan-javaboary sy farihy tsara tarehy, kojakoja mahavariana misy tarehimarika mitovitovy amin'ireo olo-malaza miavaka sy ny tantaran'ny monasitera. Ary koa ny crematorium sy ny fasan'ny monasitera. Izany rehetra izany dia misy malalaka ary tsy raharahian'ny fitsidihana.
Midina lalina ao amin'ilay kompania amin'ny zaridainan'ny zaridaina - tsy misy ny fitsidihana an-tsoratra ao ary saika ilaozana foana izy. any, toy ny toerana misy azy izao, afaka mahatsapa ny tena rivo-piainana.
Azonao atao koa ny miditra malalaka amin'ny viharn (trano kely), aorian'ny fikapohana ny lakolosim-baravarana ary misaintsaina any.
Betsaka ny chedis manana CD sy DVD boaty. Ny lakilasy dia azo raisina an-kalalahana, avelao ny fanomezana be fankasitrahana (famarotana vola arak'izay tianao hatao). Ao amin'ny disc disc mozika mahafinaritra hisaintsaina.
Ary koa, raha ataonao lalindalina kokoa ao amin'ny tempolin'ny tempoly dia misy sehatra fijery mahafinaritra.
Ora fanokafana sy ny fomba hahazoana any amin'ny Tempolin'i Wat Yan.
Misokatra isan'andro i Wat Yang from 8 to 16.
Tsy ao Pattaya no misy azy io fa 15 km miala eo. Tsy mandeha any aminy ny fitateram-bahoaka, afaka mitondra taxi na taxi-be ihany ianao.
Address: 999 หมู่ 11 Pattaya City, Distrika Bang Lamung, Chon Buri 20260, Thailandy
telefaonina: + 66 81 586 0188
Tranonkala ofisialy http://watyanasangvararam.com/
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/DuXqpx69ahX5kV697
Fampitana ny Gallery ao amin'ny tranombakoka Zavakanto any am-paradisa
Ity tranom-bakoka ity dia nanangona sary hoso-doko mihoatra ny 150 amin'ny sary ho fanoherana ny fiaviany. Ny fiantraikany optika dia miteraka ny famoronana sary tena izy. Misaotra an'izany rehetra, ny olona rehetra dia mety ho lasa ampahany amin'ny sary.
Ny fitsipiky ny tranom-bakoka (galantsara) dia hoe tsy afaka mandeha irery tsy mitondra tongotra ianao. Amin'ny fidirana dia hangatahana ny fakanao ianao. Afaka mividy kiraro ianao, na mandeha amin'ny anao manokana raha tsy te handeha tsy misy kiraro intsony.
Amin'izao fotoana izao (Desambra 2019), ny toetry ny sary hoso-doko maro dia mamela be izay tiana. Toerana maro no ketraka sy manazava, izay mety hanimba ny vokatr'izany. Ary matetika ny fizaram-baravarana be dia be, izay afaka mandrindra ihany koa ny asa fanaovana sary tsara. Mikasa ny handany adiny roa mandritra ny fitsidihana.
Mitranga tampoka izany
Hanana fahafahana ny fampirimana rindranasa manokana amin'ny alàlan'ny telefaona (ny rohy fampidinana dia hosoratana mivantana eo amin'ny rindrina eo am-baravarana), izay ahafahanao mamelona indray ny sary hoso-doko ("Augmented Reality"). Indrisy anefa, ny fampiharana dia efa "anton-taona" ary tsy nahomby tamin'ny telefaona maoderina. Noho izany, matetika dia mihazakazaka ho an'ny "manafintohina" izany, ary ny famahana ny sary dia ambany kalitao ary ambany ny vahaolana farany. Fampiharana antsoina Zavakanto any am-paradisa. Azonao atao ny misintona mialoha amin'ireo rohy eto ambany:
Rohy amin'ny fampiharana Art amin'ny paradisa ho an'ny Android
Rohy fampiharana Zavakanto any am-paradisa ho an'ny IO
Misokatra fito andro isan-kerinandro ny tranom-bakoka, manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 21. Ny tapakila mivarotra hatramin'ny 20.
Ny vidin'ny fitsidihana ny galeriany "Zavakanto any paradisa » sy ny fomba fiasa.
Ny vidin'ny tapakila olon-dehibe 400 baht.
Ny vidin'ny tapakila ho an'ny zaza dia voafaritry ny haavon'ny zaza:
ambany 1 m - maimaim-poana
manomboka amin'ny 1 m ka hatramin'ny 1,2 m - 300 THB
mihoatra ny 1,2 m - amin'ny vidin'ny "olon-dehibe" - 400 baht
Mode mode: Isan'andro manomboka amin'ny 9.00 a.m ka hatramin'ny 21.00 p.m.
Ahoana ny fomba hahazoana any Art any Paradisa
Ity tranom-bakoka ity dia eo amin'ny faran'ny làlana faha-2 amin'ny Pattaya, mifanohitra amin'ny Tiffany Show Building. (tondro amin'ny sarintany)
Site ofisialy http://www.artinparadise.co.th/
Address: 9 ที่ 78 34/20150 Pattayasaisong Rd, Distrika Bang Lamung, Chon Buri XNUMX, Thailandy
telefaonina: + 66 38 424 500
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/GZbrnKDC1N1NBRYR7
Rano Ramayana (Valan-drano Ramayana)
Famaritana ny tanimbary Ramayana
Io no toeram-piompiana rano lehibe indrindra any Thailand. Any Azia izy dia mandray toerana faharoa ary laharana faha-12 eto amin'izao tontolo izao!
Ahitana toerana mahasarika mihoatra ny 50 isaky ny tsiro rehetra - avy amin'ny morontsiraka roller tafahoatra mankany amin'ny faritra tony sy azo antoka.
Misy koa renirano "kamo" 600 metatra ny halavany, ahafahanao midina amin'ny lava-bato azo ihodivirana, ary dobo filomanosana misy onja tondraka.
Sarintanin'ny valan-javaboary Ramayana. Pattaya
Sarintanin'ny valan-javaboary Ramayana
Mizara fizarana 2 kilalao ho an'ny ankizy ny zarantany. Ny voalohany dia ahitana loharano samy hafa miaraka amin'ny halaliny ary natao ho an'ny ankizy any an-tsekoly, ary ny faharoa dia ahitana ny fisehoan'ny tanànan'ny rano iray izay ahitanao ny mason-tsolika, tohatra, basy anaty rano, loharano ary sakana lehibe avy any ambony, izay feno rano ary ariana indraindray. Ao amin'io faritra io ihany dia misy ny renirano "kamo" ary dobo misy onja. Mbola afaka mivezivezy amin'ny maze ianao ary mamelona ireo elefanta.
Vidiny ao amin'ny Valan-javaboary Ramayana. Foto-drafitr'asa.
Tapakila ho an'ny olon-dehibe sy tanora hatramin'ny 15 taona 1440 baht (ao anatin'izany ny buffet maimaimpoana) na 1190 (tsy misy buffet)
Ho an'ny ankizy hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 14 taona - 1040 baht (fomba miakanjo) na 890 (tsy misy buffet).
Ho an'ny ankizy latsaky ny 4 taona dia miditra maimaim-poana.
Ho an'ny olon-dehibe mihoatra ny 60 mahery, vehivavy bevohoka sy olona sembana, ny vidin'ny tapakila 840 baht (fomba miakanjo) na 590 (tsy misy buffet).
Ny tosika maro dia manana fakantsary. Ary raha mametaka fehin-tanana eny aminy eo amin'ny fidirana (navoaka eo amin'ny fidirana amin'ny zaridaina) ianao dia afaka atao FREE Makà sary momba ny tenanao amin'ireto andalana ireto. Ary na video aza raha hisy sary be.
Ny tsipika rehetra amin'ny hazakazaka ao amin'ny alokaloka, ary tena azo ampiharina. Tsy mandoro
Ao amin'ny zaridainan'ny rano ny zavatra rehetra afa-tsy ny sakafo FREE.
Azonao atao ny misafidy misimisy ilay fotoana hampiasa ny pretra tsy voafetra. vidin'ny 299 baht ho an'ny olon-dehibe, ary 199 baht ho an'ny ankizy avy amin'ny 91 ka hatramin'ny 121cm.
Ho an'ny orinasa, afaka manofa trano kely iray ao amin'ny zaridaina rano ianao mandritra ny andro. Mahatratra 700 ka hatramin'ny 1900 baht izany, arakaraka ny haben'ny trano. Misy trano ho an'ny olona 2-4 - 700 baht, olona 4-8 - 1200 baht, olona 8-12 - 1900 Baht.
Ahoana ny fomba mankany amin'ny zaridainan'ny rano Ramayana. Fomba fandidiana
Tsy ao Pattaya ny tenany, Ramayana, fa 15 km atsimo amin'ity tanàna ity. Afaka mandeha amin'ny fiarakaretsaka ianao na amin'ny fiara fitaterana.
Address: 9 หมู่ ที่ 7 Ban Yen Rd, Na Chom Thian, Distrika Sattahip, Chon Buri 20250, Thailandy
telefaonina: + 66 33 005 929
Powered from 10.00 to 18.00 isan'andro!
Site ofisialy https://www.ramayanawaterpark.com
Manoro hevitra ny hitsidika azy ireo izahay amin'ny andro faran'ny herinandro, satria misy olona be dia be amin'ny faran'ny herinandro, izay midika hoe filaharana be dia be ny toerana mahasarika.
Tena tsara ho an'ny rehetra ity zaridainan'ny rano ity :). Misy ihany koa ny faritra ho an'ny kely indrindra, ary misy faritra amin'ireo mpanazatra tena masiaka.
Nong Nooch Botanical Garden (Zaridaina tropikaly Nong Nooch)
Fampijaliana momba ny zaridaina tropikaly Nong Nooch any Pattaya
Ity zaridaina botanika ity no zaridaina botanika tsara tarehy sy lehibe indrindra any Azia Atsimo Atsinanana! Nasaina notsidihin'ny tsirairay izy, ka tsy namela olona tsy hiraharaha! Ho an'ny ankizy manokana dia mampiavaka azy. Ny be dia be amin'ny fampirantiana dinôzôro, ary ny zavamananaina hafa dia tsy hamela azy ireo tsy ho voaro tsara.
Na dia tsy miditra amin'ny zaridainam-panjakana aza, efa teo akaikin'ny fidirana dia afaka mahita ny sary sokitra amin'ny sary sokitra elefanta sy lolo, izay vita amin'ny vilany seramika. Eto dia azo atao koa ny maka sary miaraka tigra, gidro ary biby hafa.
Rehefa avy nandoa vola ny fidirana dia homena ny sarintanin'ny zaridaina ianao, ary aorian'izany dia hanana fahafahana hahazo mankafy tanteraka ny tany mahafinaritra an'ny zaridaina! (sarintany eto ambany).
Misy fahafahana hiditra ao amin'ny zaridaina, izay ny voan'ny orkide samy hafa dia jereo, misy lolo maniry, hazo palmie ary cacti, izay reharehan'ny tanimboly!
Misy ihany koa ny fivarotana souvenir amidy orkide amina tavoahangy fitaratra ho an'ny fitaterana mora, ary boky torolàlana amin'ny fambolena ireo voninkazo ireo.
Manomboka amin'ny 300 baht (eo ho eo amin'ny $ 10) ny vidiny ho an'ny tavoahangy iray misy tsimoka maromaro.
Rohy roa ho an'ny famoahana ny zaridaina
Ny faritra lehibe amin'ny zaridainan'ny zaridaina dia azo jerena avy amin'ny faritra ambany (ambanin'ny tany) na avy any ambony (haavon'ny hazo); namboarina ho an'ny safidy faharoa ny tetezana. Ny tsara indrindra rehetra, avy amin'ny haavo ambony dia azonao jerena ny endrika marindrano amin'ireo faritany, izay atao amin'ny endrika isan-karazany, ao anatin'izany ny frantsay sy ny anglisy.
Ambony ambony amin'ny Botanical Botanical Nong Nooch
Fa ny sarin'ity zaridaina botanika ity, atolotra etsy ambany, dia ho mahay kokoa noho ny teny rehetra, ary tsara kokoa afa-tsy ireo ihany no afaka fitsidihana mivantana amin'ity zaridaina mahavariana ity!
Manofa bisikileta koa ao amin'ny zaridainam-panjakana ary mitaingina elefanta dia mbola azo atao! manerana ny zaridaina botanika.
Ho fanampin'ny zavamaniry tropikaly, azonao atao ny mijery fampisehoana amin'ny elefanta.
Fampisehoana elefanta ao amin'ny zaridaina Nong Nooch
Fantatr'izy ireo ny fomba hilalao volley, manao sary ary mitaingina bisikileta. (horonan-tsary mampiseho toy izany izay azonao jerena eto ambany pejy)
Rehefa vita ity fampisehoana ity dia afaka mividy "hoso-doko" hosodoko amina elefanta sy souvenira isan-karazany ireo mpitsidika. Handany fotoana be handinihana ny zaridaina botanika manontolo, noho izany antony izany dia tsara kokoa raha manisy sakafo kely sy misotro rano eto isika mandritra ny dia. Misy daholo ny fotodrafitrasa ilaina amin'izany.
Ny fisehoana ny zaridaina botry Nong Nooch dia voatahiry tsy tapaka, hanatsarana ny toetrany, hitahiry ny karazana zavamaniry tropikaly, fanovana ireo fivoarana naseho!
Sari-tany. Fivoaran'ny zaridaina tropikaly Nong Nooch any Pattaya
Sarany fidirana mankany amin'ny zaridaina tropikaly Nong Nooch
Vidiny tapakila - tamin'ny 500 baht ka hatramin'ny iray arivo sy sasany. Ny vidiny dia miankina amin'ny izay hampidirina ao amin'ny vidin'ny tapakila (Transfer, fampisehoana isan-karazany amin'ny valan-javaboary, sakafo, sns)
Fitsangatsanganana avy amin'ny zaridaina botanika, anisan'izany ny famindrana dia + famonoana elefant + tolotra, + ny vidin'ny vidiny 550 baht. Ny tapakila ho azy ireo dia azo vidina mivantana eny an-dalambe any Pattaya - eny amin'ny famoronana misy ny soratra hoe "tour-information". Azonao atao ihany koa mividy tapakila mivantana amin'ny tranokalan'ny zaridaina ambanin'ny rohy -
Vidiny marina sy ny fandefasana tapakila an-tserasera amin'ny tranokalan'ny zaridaina - http://www.nongnoochtropicalgarden.com/booking2hotels_book/
Ny vidin'ny sakafo ao anaty zaridaina dia avo. noentina hanangona tahiry amin'ny kitapo sy rano 🙂.
Ny fitsidihana dia mety tsy ho ampy na dia isan'andro aza. Ka ao foana ao an-tsaina.
Ahoana ny fomba hankanesana amin'ny Nong Nooch. Ora fiasana zaridaina.
Misokatra ny fidirana amin'ny Nong Nooch from 8 to 18 isan 'andro.
Misokatra hatrany ny trano fisakafoanana etsy amin'ny faritany 22 ora.
Ny tranonkala ofisialy ny valan-javaboary - http://www.nongnoochtropicalgarden.com/
Address: 34 Na Chom Thian, Distrika Sattahip, Chon Buri 20250, Thailandy
telefaonina: + 66 38 238 061
Vidiny marina sy ny fandefasana tapakila an-tserasera - http://www.nongnoochtropicalgarden.com/booking2hotels_book/
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/S34Aemvy5bYvqruv7
Nong Nooch no misy 20 km miala ny afovoan'i Pattaya. Ny fitateram-bahoaka sy ny bisikileta no fomba tsara indrindra hahatongavana eto. Taxi be na taxi môtô no hanao. Ohatrany amin'ny vidiny izany 300 baht ary indrindra mahasoa raha vondrona mpitsidika misy olona maromaro.
Fa ny safidy mahasoa indrindra amin'ny fanatonana ity saha ity dia ny ho lasa mpikambana ao amin'ny fitsangatsanganana vondrona. Ny fitsangatsanganana toy izany dia nokarakarain'i Nong Nooch tenany. Ny tapakila ho azy ireo dia azo vidina mivantana eny an-dalambe any Pattaya - eo amin'ny famoronana misy ny soratra hoe "tour-information". Ny fandoavam-bola (raha ny mahazatra) dia ny fanaterana mpizahatany amin'ny fiara fitateram-bahoaka avy any amin'ny hotely mankany amin'ny zaridaina, ny tapakila fidirana, ny asan'ny torolàlana, seho iray ary ny fampitana elefanta avy any Nong Nooch mankany amin'ny hotely amin'ny faran'ny fitsidihana. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ilay rohy handefasana tapakila amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny zaridaina botanika. http: //www.nongnoochtropicalgarden.com/booking2hotels_book/
Tempolin'ny fahamarinana (Fahamasinan'ny fahamarinana), Prasat mai
Tempolin'ny fahamarinana. Prasat mai. Overview
Tempolin'ny hazo vita amin'ny hazo, izay mety tsara eo amin'ny morontsiraka avaratr'i Pattaya. Ity dia tempoly iray tany am-boalohany, ny fananganana izay natomboka tamin'ny 1981 nataon'ny philanthropist Thai iray - mpandraharaha.
Izy io dia tsy manam-paharoa amin'ny toetra mampiavaka azy. Ary raha ny marina, mifanentana kokoa amin'ny tranom-bakoka vita amin'ny hazo noho ny tempoly. Saingy na izany aza, manana ny satan'ny tempolin'ny fandidiana izy, ary noho izany dia aza hadino ny momba ny fehezan-dalàna mifanaraka: Ny vehivavy dia tsy tokony hanana soroka sy lohalika misokatra, ary koa akanjo akanjo mangarahara. Tsy tokony ho eto amin'ny fety shorts sy T-shirt ny lehilahy. Ary amin'ny fidirana amin'ny tempoly, homena satroka ianao, raha tsy izany dia tsy afaka miditra ao amin'ny tempoly ianao!
Eo amin'ny fidirana dia afaka mahazo Paraha trano ianao.
Mizara ho efitra 4 teokratika ny ao anatiny: India, China, Cambodia ary Thailand.
Ary koa, ny iray amin'ireo angano milaza fa ireo maniry (voatery miaraka) hanana zanaka efa ela no tokony ho tonga eto amin'ny sarivongana mampiseho ny reny, ray ary zanany telo. Mila manosihosy ny fatran'ny zaza ianao ary milona amin'ny maha-reny sy ny maha-ray. 🙂
Ny Tempoly Fahamarinana dia naorina tanteraka tamin'ny hazo fa tsy nisy fampiasana vy sy vy vita amin'ny vy. Ny haavony dia 105 m! Ankoatra izany, ny kianja tsirairay. jereo ny tany dia voaravaka sary sokitra tsy manam-paharoa, inona ny ao anatiny, izay ivelany!
Ny sary sokitra anatiny ao amin'ny Tempolin'ny Fahamarinana
Ny Tempoly Fahamarinana dia tsy vita amin'izao fotoana izao (12.2019), ary ny fahavitan'ny fananganana dia kasa amin'ny tapany faharoa amin'ny 2020. Na dia, ilaina aza ny manome alalana ho an'ny fihenan-tsasatra any Thais. 🙂
Saingy raha ny toetra sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny fananganana ny tempoly dia resahina amin'ny fanamboarana farany tsy misy farany. Na izany aza, ny vokatra vita amin'ny hazo dia iharan'ny herin'ny trangan-javatra sy ny rivotra iainana.
Ao amin'ny faritry ny tempoly dia misy trano fisakafoanana izay azonao hohanina. Misy serivisy Thai nentim-paharazana azo alaina ihany koa - mitaingina elefanta na soavaly, maka sary, na milomano anaty sambo (misy ny morontsiraka misy azy).
Indroa isan'andro, manolotra fampisehoana dihy nasionaly ny tempoly.
Ny tempoly dia manome fitsidihana fitarihana. Amin'ny fiteny samihafa. Anisan'izany ny anglisy, rosiana, sinoa.
Ny fitsangatsanganana dia isaky ny antsasaky ny ora. Maimaim-poana. Saingy tsy misy afaka manakana anao tsy hisaotra ny torolàlana amin'ny tendro iray. 🙂
Fidirana amin'ny tempolin'ny fahamarinana. Fomba fandidiana
Manomboka amin'ny vidin'ny tapakila marobe 500 baht ary dia voafaritry ny programa, izay mety ahitana ny sakafo hariva, ny soavaly ary ny singa hafa.
Manomboka ny vidin'ny tapakila ho an'ny ankizy 350 baht.
Misokatra ho an'ny mpitsidika ny tempoly fito andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 18
Raha manao fitsangantsanganana any Pattaya ianao dia mitentina 650 baht amin'ny salanisa. Ny vidiny dia ahitana ny famindrana dia-fitsangatsanganana, fitsidihana ary fitsangatsanganana.
Iza no mila an'ity, eto no bokikely ofisialy Rosiana momba ny Tempula Fahamarinana.
Bokikely. Tempolin'ny fahamarinana. Fiteny Rosiana
Ahoana ny fomba hidirana any amin'ny Tempolin'ny fahamarinana
Any amin'ny morontsiraka ao amin'ny faritra Naklua any avaratr'i Pattaya no misy ny Fahamasinan'ny Fahamarinana. Azonao idirana amin'ny alàlan'ny fiarakaretsaka na mandeha an-tongotra, mamily ny làlambe Naklua amin'ny Soi 12, ary avy eo mandroso amin'ny tora-pasika.
Tuk-tuk avy any Pattaya amin'ny vidiny 100-150 baht.
Address: 206/2 หมู่ ที่ 5 ถนน Pattaya-Naklua, Distrika Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailandy
telefaonina: + 66 38 110 653
Tranonkala ofisialy http://www.sanctuaryoftruth.com/
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/iGDSWX4cEt51ZCGE7
Mini Siam Ny tontolo kely indrindra
Famaritana ny valan-javaboary Mini Siam any Pattaya
Izy io dia zaridaina tany am-boalohany, izay misy kopia kely famoronana endrika maritrano vita avy amin'ny firenena samihafa. (skala 1:25).
Ny zaridainam-panjakanana Mini Siam manontolo dia mizara ho fandroana 2 - Mini Europe sy Mini Siam ny tenany ary ny 100 ny isan'ireo fampandrenesana dia manodidina ny XNUMX eo ho eo.
Ny fampirantiana Mini dia ahitana dika mitovy amin'ny marika maritrano Thai. Ny ampahany Eropeana dia asehon'i Eropa, Etazonia, Egypt ary, hafahafa tsara, Korea Atsimo.
Ny zaridainam-paritra dia ahitana fampirantiana toy ny mason-javamaniry any Bangkok, Royal Thai Palace, panoramas de capitals taloha tany Thailand - Ayutthaya sy Sukhothai, trano opera tany Sydney, Eiffel Tower, Temple of the Sky in China, statue of Liberty.
Amin'ireo trano Rosiana malaza dia afaka mahita tsangambato eo amin'ny Mamayev Kurgan sy Saint-Basil's Cathedral.
Misy aza ny hazo kely indrindra 🙂
Mamboly hazo kely eo akaikin'ireny kopia ireny; noforonina ny fandriana voninkazo, renirano, loharano ary zaridaina. Misy ihany koa ny dobo iray ao amin'ny faritany izay ahafahanao mamahana ny trondro, miala sasatra any amoron-dranomasina alokaloka noforonin'ny hazo.
Ny hariva (amin'ny 17.30) eto no mitodika ny jiro. Na dia rehefa tonga any amin'ny maizina aza dia azo jerena tsara ny zava-drehetra.
Tsy maintsy mandoa vola any amin'ny zaridainam-panjakana izahay, tsy tanora intsony (1986), ary maro ny fampandrenesana tsy nohavaozina ela, tsy naverina naverina, ary izany no antony mahatonga ny maro amin'izy ireo efa lasa nihena sy vonona hirodana.
fa amin'ny ankapobeny ny valan-javaboary dia manome fahatsapana tsara, indrindra rehefa mihodina ny jiro. Raha vantany vao tena takiana izy io. Mandritra izany fotoana izany dia fomba tsara iray ahafantarana ny toerana misy an'izao tontolo izao sy ny toerana andehanana. 🙂
Vidiny sy ora fiasana any amin'ny zaridainam-panjakanana mini Siam any Pattaya
Ho an'ny olon-dehibe ny fanekena 300 baht.
Tapakila ho an'ny ankizy - 150 baht
Misokatra fito andro isan-kerinandro ny Mini Siam from 7 to 22.
Napetraka ny jiro (hazavana fahazavana) 17.30.
Raha misy ny orana dia mahazo elo azo alaina ny mpitsidika
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia ny 16.30. Vitsy dia vitsy ny olona, ​​ary aorian'ny adiny iray dia mivadika ny jiro, ka ho hitanao ny zaridaina misy sy tsy misy. Mandritra ny andro, ny fitsangantsanganana iray manontolo matetika tonga eto, noho izany dia afaka mitangorona. Mamaky adiny roa adiny roa ho an'ny fitsidihana mangina.
Ahoana ny fomba hahazoana any amin'ny zaridaina miniature
Ity zaridainam-panjakana ity dia hita any avaratry Pattaya, eo amin'ny lalana Sukhumvit, akaikin'ny lalan-dry zareo miaraka amin'i Soi 33.
Afaka tonga eto ianao amin'ny tamp-tuk. Mba hanaovana izany, mila mandeha any amin'ny làlan-kianjan'ny North Road ianao miaraka amin'i Sukhumvit akaikin'ny gara. Toa ny T-junction, akaikin'ny tokony hiverenanao miankavia mankany Sukhumvit, avy eo miampita ny tetezana ho an'ny mpandeha an-tongotra, mandalo amin'ny ilany amin'ny làlana. Ny elanelana mankany Mini Siam miala eo amin'io lalan-kely io dia 200 m eo ho eo.
Address: 387 Sukhumvit Rd, City Pattaya, Distrika Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailandy
telefaonina: + 66 38 727 666
Ampianaro ny sarintany amin'ny fanamoriana https://g.page/mini-siam-pattaya-thailand?share
Ranomasimbe "ranomasina ambanin'ny tany" (Pattaya eran-tany)
Ny fijerena ny Aquarium Eran-tany Pattaya
Ity dia aquarium izay misy biby sy trondro an-dranomasina no mipetraka ao amin'ny Hoalan'i Thailand. Ity aquarium ity dia toa toy ny tonelina, izay ny halavany izay 105 m. Ity aquarium ity dia mety amin'ny fitsidihana miaraka amin'ny ankizy.
Ity ranona-dranomasina ity dia fonenan'ny trondro 2500 an'ny karazana roanjato (200).
Ny jellyfish dia tena mahavariana an'izany ary amin'ny ankapobeny ny ranomasina manasongadina dia tsara taratra.
Mizara 4 izy io:
Ny faritra voalohany amin'ny akneola dia ahafahanao mifankafantatra amin'ny trondro tsara tarehy sy tsy fahita firy.
Amin'ny faharoa, miaina ny trondro cartilaginous, izay misy ny stingrays sy ny antsana.
Ny fahatelo dia misy trondro ara-barotra, ary koa ny sokatra.
Ilay faritra fahefatra dia ny trondro avy any Amazona, ary koa ny trondro trondro lehibe indrindra.
Amin'ny fotoana samy hafa ao amin'ny faritra tsirairay amin'ny aquarium, dia mamahana ny mponina eto amin'ity faritra ity, izay toa karazana fampisehoana ho an'ny mpitsidika.
Manana toerana tokony hisy koa io Dobo farihy manokana izay farihy, izay ahafahanao mamahana trondro samihafa amin'ny tananao. aza triatra ankizy any.
Vidiny ho an'ny Aquarium manerantany ambanin'ny tany ao Pattaya
Tapakila olon-dehibe eto dia mitentina 500 baht,
Ny saran-dalan'ny tapakilan'ny ankizy dia 300 baht.
Ho an'ny ankizy ambany noho ny 90cm, maimaim-poana ny fampidirana.
Ny tontolon'ny rano dia misokatra mandritra ny fito andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 18.
Ahoana no fomba hankanesana any amin'ny Underwater World Aquarium
Hita ao amin'ny: 22/22 Moo 11 amin'ny lalana Sukhumvit.
Afaka 15 minitra eo ho eo vao tonga eto afovoan'i Pattaya.
1 km ny halaviran'ny Pattaya lehibe an'i Tesco Lotus Mall.
Mba hahazoana any amin'ny Tany ambanin'ny tany avy any Tesco amin'ny fitaterana manokana, dia mila mandeha mianatsimo manaraka an'i Sukhumvit eo ankavanan'ny lalam-be ianao.
Amin'ny tuk-tuk dia afaka mitondra fiara koa any amin'ny aquarium ianao.
Avy any amin'ny Pantai Jomtien, afaka mandeha mankany amin'ny tontolon'ny rano ambanin'ny tany haingana ianao.
Elefanta Village (Tanànan'ny Elefanta Pattaya)
Iray amin'ireo ivon-jaza elefanta maro be tany Thailand izany. Eto ianao dia afaka mifankafantatra amin'ny fiainana andavan'andro sy ny fampiofanana an'ireny biby mampinono goavana. Ny elefanta dia mampiseho ny mpitsidika ny fomba filalaovany baolina, manao sary, mitondra fiara ary milalao mozika amin'ny zavamaneno isan-karazany. Azonao atao ihany koa ny mahita ny fizotran'ny elefanta iray any an'ala ary mitaingina elefanta mandritra ny adiny iray (ao amin'ny faritry ny vohitra elefanta) na telo ora (any anaty ala).
Tsara homarihina anefa fa ny olona izay tsy tiana manokana amin'ireny biby ireny na efa namangy ohatra, ohatra, ny fampisehoana elefanta ao amin'ny Nong Nooch, ity toerana ity dia mety tsy dia mahaliana manokana, ankoatra izany, ny fidirana eto dia tsy mora.
Ny bisikileta elefanta iray adiny iray dia manomboka amin'ny 9, 10:30, 12.30 ary 16.30
Adiny telo amin'ny 10.30 sy 16.00.
Valan-javaboary vato an-tapitrisany taona sy ny fiompiana voay (Valan-javaboary vato an-tapitrisany taona sy fiompiana voankazo pattaya Pattaya
Sarany fidirana mankany amin'ny zaridaina vato an-tapitrisany taona. (Rates)
Site ofisialy https://www.thaistonepark.org/en/
Pattaya North dia misy torapasika fandroana maromaro. Anisan'izany ny morontsirak'i Zign Hotel ary Wong Prachan Beach. Ny tora-pasika faharoa dia tsy mihoatra ny voalohany. Avy amin'ny faritanin'i Wong Prachan, dia misokatra ny fomba fijerin'ny Tempoly Fahamarinana. Azonao atao ny miditra ao amin'ny Wong Prachan amin'ny alàlan'ny Hotel Hotel View. Kely tsy fantatra ireo torapasika ireo. Ary misy vitsivitsy te-handeha hiakatra amin'ny morontsiraka avaratra amin'ny tanàna, ary avy eo mandeha amin'ny sehatry ny hotely mankany amin'ny tora-pasika. Na dia manome tombony ho an'ny endri-pivoriana aza ireto: vitsy ny mpitsangatsangana any amoron-dranomasina roa, madio tokoa ireo torapasika ireo.
Farihy Wong Amat (Farihy Wong Amat)
Fijerena momba ny Pantai Wong Amat / Naklua (Ilay The beach madio indrindra any Pattaya)
Io no tora-pasika lehibe any avaratry Pattaya, antsoina koa hoe Naklua /Naklua. Ho fanomezam-boninahitra ny anaran'ny faritra izay misy izany.
Raha ny filazan'ny maro dia io no tora-pasika madio sy ranomasina madio any Pattaya! Ho fanampin'io, avy amin'ny tora-pasika ity fomba fijery mahafinaritra amin'ny filentehan'ny masoandro!
Eo amoron-dranomasina dia misy làlan-tongotra mitaingina mpiambina tsara mifanakaiky ny faritry ny hotely avo lafo vidy manodidina ny tora-pasika. Misaotra an'ireo trano fandraisam-bahiny ity amoron-dranomasina ity ny fahadiovana tsy tapaka.
Araky ny voalaza etsy ambony dia efa voahazona tsara ny moron-dranomasina ary miaraka amin'izay koa, tsy zokinjokiny.
Madio ny fasika, voafehy tsara. Ny rano dia tsy fantatra, izay mahazatra ho an'ireo torapasika any Pattaya. Ary koa, ny fasika ao amin'ny torapasika dia malalaka ary mamela anao tsy hahatsapa ho an'ny vahoaka, na dia feno olona aza. Saingy mandritra ny fitsangantsanganana avo any amin'ny faritry ny hotely, lasa tery tanteraka ny fantsom-pasika ary saika mahatratra ny fantsom-bato ny rano.
Amin'ny tapany voalohany amin'ny andro dia matetika ny ranomasina tony ary amin'ny onja hariva sy ny rivotra misondrotra.
Ny alokaloka voajanahary amin'ny tora-pasika dia tsy ampy. Fa tsy izany, fa alohan'ny sakafo hariva. Ary avy eo, ny tora-pasika sisa tavela amin'ny masoandro ary ny alokaloka dia tsy hita afa-tsy eo ambanin'ny elo marindrano.
Ny fidirana amin'ny rano amin'ny rano matevina dia malefaka ary tena tsara ho an'ny ankizy, ary maranitra mandritra ny rano, fa milamina kosa.
Any amin'ny ilany avaratra amoron-dranomasina, manomboka amin'ny Wong Amat Tower, ao ambadiky ny kaopy kely iray, misy morona tsy misy fasika. Eto ary dia be dia be ny akorandriaka, ary tsara kokoa ny miala tampoka amin'ireo toerana ireo, raha tsy manao ankihosy.
Ity lavaka ity dia masiana vato be lehibe ary ny hazo mihantona eo ambonin'ny rano (amin'ny rano avo). Avy amin'ity morontsiraka ity, indrindra ny natiora romantika dia mandinika ny hevitry ny sunai masoandro tsara tarehy!
Cove akaikin'i Wong Amat Beach
Fotodrafitrasa amoron-dranomasina Wong Amat. vidin'ny
Ny tora-pasika dia manana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina tsara. Dobo filomanosana fiarovana. Tsy misy foto-drafitrasa any amin'ny faritra avaratra amoron-dranomasina, tsy misy alokaloka, tsy misy masoandro, ary tsy misy mpivarotra. Avy amin'ny sisiny atsimo, eo amin'ny kafe, izay misy vato lehibe, misy ny zavamaniry sy ny fipetrahana amin'ny aloky ny hofany. Ity no toerana tsara afenina ny masoandro amin'ny tolakandro.
Any amoron-dranomasina (afovoany sy atsimo) dia misy ny kafe (somary avo kokoa noho ny salan'isa any Pattaya) ny vidiny, ny trano fisakafoanana ary hotely. Ny mpivarotra dia mandeha amin'ny tora-pasika miaraka amin'ny hanina isan-karazany. Misy Massage.
Fandriana masoandro miaraka amin'ny elo - 100 baht amin'ny vanim-potoana ambony sy 40 baht amin'ny ambany. Tsy hita na aiza na aiza izy ireo fa eo amin'ny faritra mifanohitra amin'ny hotely ihany. Ary noho izany, indrisy fa tsy manofa trano ny maro amin'izy ireo.
Misy daholo ny fialamboly izay mahaliana. ATV, parasailing, jet skis, akondro rano sy ny maro hafa.
Jet skis 1500 baht ao anatin'ny 30 minitra (raha maraina dia afaka 1000 ary on ora manaiky 🙂)
Azo alaina amin'ny vidiny fanampiny ny fandroana sy trano fidiovana (10-20 baht) any amin'ny kafe rehetra amin'ny tora-pasika. Amin'ny faritany mifanakaiky amin'ireo hotely dia misy koa ny trano fidiovana, ny fanovana efitrano, ny fisehoana fa tsy amin'ny toerana rehetra ary tsy voatery ampiasaina foana na dia ny vola aza.
Manodidina ny moron-dranomasina, misy serivisy fanamasinana no misy. Ny vidiny dia somary mahazatra ho an'ny Pattaya
Raha lazaina amin'ny teny dia toa "saro-pady" ny làlana ka izay mora indrindra ny mampiasa ny mpanamory. Teboka iray miaraka amoron-dranomasina eo amin'ny sarintany dia aseho eo amin'ny rohy eto ambany. Ny navigateur dia hitarika anao ho any afovoan-tora-pasika fotsiny.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/HDmWJBUDPboGRjn49
Pattaya Beach Beach (Pantai Pattaya)
Ao amin'ny faritra afovoany Pattaya dia misy ny moron-dranomasina mitovy anarana. Eto, voalohany indrindra, misy ireo fety samihafa, andro fialantsasatra be, fety, tolona masoandro ary alina. Saingy vitsy ny olona mandro eto, indrindra ny ankizy eo an-toerana. Eto ianao dia afaka mahita sambo mpanarato maro, lalana ary famantarana hafa an-tanàn-dehibe: trano fandraisam-bahiny lehibe sy lafo vidy (anisan'izany ny Hilton), ny trano fivarotana Mike Shopping sy Festival. Maloto ny rano any an-dranomasina, madio foana koa ny fasika. Indrindra manokana ny tontolo iainana tsy misy masoandro. Teo akaikiny dia misy alim-pitondrana amboaram-boasary misy hazo palmie maniry eny amin'ny sisiny. Tena mety hihaona amin'ny masoandro any.
Cozy Beach (Morontsiraka malefaka)
Fampijaliana ny Cozee Beach any Pattaya
Ity dia tora-pasika kely izay hita ao amin'ny Cape Pratumnak. Manakaiky azy dia ny hotely mitovy anarana. Io tora-pasika io dia voahodidina tanteraka ny tehezan'ny havoana, rakotra zavamaniry tropikaly ary misy tora-pasika manome fomba fijery mahafinaritra!
Ny midina mankany amoron-dranomasina dia azo atao amin'ny alàlan'ny tohatra mideza, izay misy sidina maromaro.
Sarotra ny mankany amin'io tora-pasika io tsy misy fitaterana olona, ​​raha tsy hoe mipetraka tsy lavitra eo ianao. Tsy misy ny fitateram-bahoaka eo akaiky eo. Mandeha an-tongotra tsy maintsy mandeha mamakivaky torolàlana sy toerana fananganana ianao.
Amin'ny faran'ny iray, Cozy Beach dia eo akaikin'ny hotely lehibe iray eo amin'ny havoana misy ny tamba-jotra Royal Cliff, ary eo amin'ny farany kosa dia vatofy iray voasaron'ny hazo, eo akaikin'ilay vato miparitaka vato. Eto, akaikin'ny fitsofana, dia misy orana mando any amin'ny ranomasina.
Amin'ny lafiny mifanohitra amoron-dranomasina avy amin'ny Royal Cliff Hotel (eo ankaviany, manatrika ny ranomasina) dia misy oram-be ao amin'ny ranomasina. Noho izany, tsara amin'ity lafiny ity dia tsara kokoa ny tsy milomano. Ny rano eo tsy madio. Fa ny ampahany afovoany na amin'ny ankavanana (akaikin'ny hotely) dia azo ekena fa milomano ny rano. Ary ho madio kokoa noho ny any amin'ny morontsiraka malaza ao Pattaya.
Ny fasika any amoron-dranomasina dia maivana, maivana. Tsara izany.
Malalaka ny fidirana amin'ny rano amin'ny fantsom-peo ambany, fa amin'ny rivotra avo dia tsara izany. Tsara homarihina koa fa any amoron-tsiraka amin'ny fidirana amin'ny rano dia misy vato maranitra, ka tokony hitandrina ianao.
Ny halavan'ny Cozy Beach dia 500 m, ny halavany dia 20 ka hatramin'ny 25 m. Amin'ny rano kely dia lasa màla be izy io. Ny ankamaroan'ny milomano eto dia ny vahiny ny hotely akaiky indrindra. Saingy ireo izay mitady fialantsasatra amoron-dranomasina miala sasatra dia tonga eto koa.
Ity tora-pasika ity dia manome fomba fijery mahafinaritra ny masoandro. Ary koa, ny faravodilanitra eto dia tsy misy na inona na inona, satria ny nosy Ko Lan no eo akaikin'ny morontsiraka. Ary eo alohan'i Ko Lanaom koa dia afaka mahita ilay nosy kely an'ny Private Island Koh Khrok ianao ary somary manana ny ilany havanana eo amin'ny nosy kely Ko Koak
Ampy tsara ny fotodrafitrasa any amoron-dranomasina. Misy zavatra rehetra ilainao amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina sy ny fialamboly. Fandriana masoandro (fa tsy masoandro sipa), elo, tolotra, serivisy kely ary trano fivarotana kely tsotra
Eo koa ny fanamboarana trano fiaramanidina fiaramanidina sy lakana.
Sarotra ny mankany amin'io tora-pasika io tsy misy fitaterana olona, ​​raha tsy hoe mipetraka tsy lavitra eo ianao. Tsy misy ny fitateram-bahoaka eo akaiky eo.
Adiresy (hotely misy anarana mitovy): 400 หมู่ 12 Phra Tamnak, Muang Pattaya, Distrika Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailandy
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://g.page/cosy-beach-hotel?share
Beach Cafe Kebidges & Condom (Cabbages sy Condoms)
Mba hahatongavana eto dia tokony handeha amin'ny tranokala misy an'io kafe io ianao. Amin'ny alalany no iharan'izany rehetra izany. Ny diako mankany amoron-dranomasina dia azo atao amin'ny alàlan'ny alàlan'i Cape Pratamnak. Io torapasika io no manana halavany eo ho eo amin'ny 200 m sy ny sakany kely. Ny masoandro milentika eto dia miharihary matetika matetika eo amin'ny laharana 1, fa indraindray kosa amin'ny 2. Amin'ny maraina, misy alokaloka ampy mamorona hazo. Ny morontsiraka dia rakotra fasika fotsy mavo, misy felana volondohany. Manakaiky ny sainy dia lehibe ny fasika ary misy vatomamy.
Amin'ny fantsom-peony ambany dia misy tsipika vato eo amin'ny sisiny havanana, izay feno hipoka miaraka amin'ny molotra marevaka. Eto ianao dia afaka mandamina amina sary mahaliana. Amin'ny maraina sy amin'ny fotoana onjan-drano lehibe, matetika dia voaloto ny rano. Maloto madio ihany anefa mandritra ny fitonian'ny ranomasina eto. Na dia izany aza, ao anaty rano ambany dia misy fotaka. Ny foto-drafitr'asa dia omen'ny masseurs, ivon-trano fisotroan-trano sy trano fisotroana an'habakabaka, na dia tsy maro amin'izy ireo aza.
Pratamnak Beach any Pattaya. Overview
Pratumnak Beach dia fitohizan'ny torolàlana Dongtan Beach, izay mitohy ny fanoharana amoron-dranomasina Jomtien. Izy ireo dia maneho ny andalana lehibe iray, tsy misy fahatapahan-dàlana miharihary. Azo atao ny tonga eo amin'ny tora-pasika voatondro amin'ny alàlan'ny alàka fahadimy any Cape Pratamnak.
Ny halavan'ny tora-pasika ity dia 500 m.
Manakaiky ny alim-by dimy, faritra be midadasika izy io, tsy misy alokaloka voajanahary ary rakotra fasika madio, izay misy fiposahan'ny masoandro.
Rehefa avy nandalo ny ilany havanana ianao dia afaka mahita haingana ny kapoaka. Eo ihany koa ny gazebo. Tsy ity no faritra madio eto amin'ity torapasika ity. Mifindra amin'ny miankavia, azo jerena ny lalamby tsy misy fotaka izay misy lalana madio. Izany dia toerana tsara tarehy.
Ny fasika eny amoron-dranomasina dia mavo, marefo mahafinaritra.
Mihena ny fidirana amin'ny rano miaraka amin'ny havanana / mikoriana. Fa amin'ny ankapobeny dia malefaka sy mety ihany na dia amin'ny ankizy aza. Misy fotoana, indrindra amin'ny fotoam-potoana, raha ny rivotra manidina eto.
Noho ny halaviran'ny toerana manintona indrindra ao Pattaya dia milamina io torapasika io. Iza no mpizahatany mankasitraka an'io. Indrindra fa fialan-tsasatra miaraka amin'ny ankizy.
Ary koa, io tora-pasika io dia miha malaza hatrany amin'ireo mpizahatany miteny Rosiana, ary ankehitriny, tsy ho ela eo no ho eo, misy famantarana matetika any amin'ny trano fisotroana sy fivarotana mampiasa ny teny Rosiana.
Ny hetsika amoron-dranomasina mahazatra eto dia tsy novolavolaina manokana. fa misy toerana tokony hisy koa. Ny fahafahana manidina onjan-drano amin'ny sambo na jet ski eto amin'ny vanim-potoana ambony dia azo antoka fa ao.
Toeram-pisakafoanana, fivarotan-damba, fitsangantsanganana - izany rehetra izany dia ao anatin'ny elanelan-tany.
Ny fidirana amin'ny tora-pasika dia maimaim-poana.
Taxi iray eto afovoan'i Pattaya no mitentina 50-100bat.
Any afovoan'ny tora-pasika dia misy fiposahan'ny masoandro. Manofa vidiny 100 baht.
Hetsika rano amin'ny vidiny mahazatra ao Pattaya. Avy amin'ny 1000 baht
Ny vidin'ny trano fisotroana kafe sy ny parlors mifanila dia tsy avo kokoa ary tsy ambany noho ny morontsirak'i Pattaya
Pratamnak beach no misy ao amin'ny faritr'i Pattaya
Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka, fa taxi iray na tuk-tuk eto avy any Pattaya kosa no azo 50 mankany 100 Baht.
Address: Soi Mu Ban Majestic Majidence, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/rEExYiZRYzVLL43TA
Sary amoron-dranomasina Pratumnak
Famintinana amoron-dranomasina Pantai Dongtan
Dongtan dia iray amin'ny foibe afovoan'i Pattaya.
Io morontsiraka io dia eo anelanelan'ny tora-pasika Jomtien any atsimo sy torapasika Protamnak any avaratra.
Amin'izao fotoana izao (Desambra 2019) dia tsy mitovy amin'ny fahadiovana. Tena marina fa tsy izany. Ny tora-pasika mihitsy dia madio sy milamina tsara, fa ny rano amin'ity tora-pasika ity dia tsy dia ilaina tokoa amin'ny lomano. Ny haben'ny oram-baratra, ny sambo miaraka amin'ny trano fidiovana mivantana any amin'ny faritra akaikin'ny morontsiraka.
Izany rehetra izany dia tsy mahatonga an'io tora-pasika io ho toerana ankafizin'ny olona tia fialantsasatra amoron-dranomasina.
fa ny sunbathe sy miala sasatra any amin'ny fasika eto dia azo atao. Hotely maro no tsy mijery ny moron-dranomasina, izay manara-maso ny fahadiovan'ny fasika sy ny tsipika.
Ankoatr'izay, ny dongtan Pantai dia malaza amin'ny moron-tsaka pelaka. Tsy midika anefa izany hoe ny solontenan'ny vitsy an'isa, fa ny ankamaroany dia maro an'isa eto raha oharina amin'ny ankamaroan'ny tora-pasika Pattaya.
Indrindra fa be dia be amin'izy ireo amin'ny faritra fidirana amin'ny morontsiraky ny trano fandraisam-bahiny Rabbit Resort.
Tsy misy fanavakavahana olona vitsy an'isa amin'ny Dongtan.
Mankafy ny masoandro any amin'ny Pantai Dongtan!
Madio ny fasika. Mandritra ny tondradrano avo dia mahazo aina ny fidirana ao anaty rano. Amin'ny rano ambany, tokony ho folo metatra no andehanananao eo amin'ny rano miaraka amin'ny halalin'ny ankihibenany, ary manomboka ny fanetren-tena.
Ny morontsiraka dia mirehitra amoron-tsiraka midadasika. Any amin'ny toerana malalaka indrindra dia afaka mahatratra 40 metatra, fa amin'ny salanjany dia 20 metatra, izay malefaka kokoa.
Ny alàlan'ny hazo rofia amin'ny moron-dranomasina manontolo dia mamorona alokaloka voajanahary, raha toa ka 20 metatra miala ny morontsiraka.
Ny tora-pasika no malaza, fa mbola mangina kokoa noho ny morontsiraka afovoany any Pattaya. akaiky tsy misy lalana be atao.
Amin'ny hariva, matetika ianao dia sendra voalavo sy akoho mivezivezy eny amoron-dranomasina.
Ny fanamboarana fotodrafitrasa any Dongtan beach dia natao tsara. Manana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fijanonana milamina izy. Eo amoron'ny morontsiraka dia misy zaridaina hazo palma sy lalan'ny mpandeha an-tongotra (ary izay mandeha indraindray amin'ny bisikileta).
Be ny palitao. Miaraka amin'ny alàka dia misy kafe marobe misy vidiny mirary ary sakafo matsiro be.
Betsaka ny mpitsabo tady sy ny basy. Ny vidin'ny massage dia salanisa. Ny sezafizan'ny masoandro sy ny seza fidiovana dia saika manerana ny moron-dranomasina, afa-tsy amin'ny toerana vitsivitsy.
Fanofa-tranon'orana miaraka amin'ny elo - 100 baht
Tafintohina eo anelanelan'ny tora-pasika i Beach Pantai Jomtien any atsimo sy torapasika Protamnak any avaratra.
Address: 311-2 Thappraya Rd, City of Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thailand
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/6WpQrtynNAREyUHv8
Beach Jomtien any Pattaya. Overview
Tsy dia madio loatra fa mbola misy maro ihany koa. Ny eo akaikiny dia be arabe. Mpandeha taxi sy tuk-tuk be no mibaby azy. Amin'ity faritra ity, baza maro, kafe, dabilio, tranombarotra, fivarotana, ao anatin'izany ny 7-Eleven.
Nalefa ny morontsiraka ny sambo, ny tompony izay miandry ny mpanjifany haka fitsangatsanganana rano.
Ny mpivarotra isan-karazany dia mandehandeha eny amin'ny faritry Jomtien, izay manolotra ny zava-drehetra avy amin'ny voankazo voankazo ka hatramin'ny rubies. Mampalahelo fa tsy madio ny ranomasina.
Jomtien Beach dia iray amin'ireo malaza indrindra any Pattaya. Amin'ny ampahany noho ny elanelana amin'ny afovoan-tanàna, ary amin'ny ampahany noho ny habeny. Ny halavany dia efa ho 6 km.
Ny tora-pasika dia manana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina sy ny fialamboly. Misy be dia be ny sipa sy ny elo raha toa ianao ka miditra amin'ny fialamboly azo atao rehetra, toy ny jet skis, sambo, akondro.
Betsaka ny kafe, trano fisakafoanana, mpivarotra misamboona eny amoron-dranomasina misy fako isan-karazany. Ho an'ny milomano tanteraka, dia tsy dia tsara, satria tsy madio ny rano. Amin'ny vanim-potoana avo, manadio tsy tapaka ireo tora-pasika. Saingy amin'ny vanim-potoana ambany, ny zavatra rehetra dia tsy misy rahona, miampy ny ranomasina miaraka amin'ny onja mitondra fako be.
Eo amoron-dranomasina dia faritra mpandehin'ny tongotra an-tongotra. Manerana ny arabe dia misy condo, trano fandraisam-bahiny, fivarotana, trano fisakafoanana, fivarotan-tena.
Ny tora-pasika no tena malaza amin'ireo mpizahatany miteny rosianina.
Fahatsiarovan-tena amin'ny Pantai Jomtien
Rano mando. Matetika (indrindra aorian'ny fandehan'ny rano be dia be ny diky)
Hodiovina tsy tapaka ny fasika, fa aza tohizana amin'ireo mpizahatany mandao fako intsony
Mpandeha bisikileta maromaro sy sambo, izay manampy ny rano an-kiato.
Fotodrafitrasa sahirana eo amoron-dranomasina, izay vitsy ny hotely. Tsy misy fandroana na kabine amin'ny toerana toa izany.
Ny etona matevina any amin'ny faritry ny faritra matetika miaraka amin'ny rano mikoriana.
Betsaka, maimbo ary setroka izay tsy tian'ny olona rehetra
Ny hariva, dia misy akoho sy voalavo amoron-dranomasina.
Ireo mpivarotra mahafinaritra manelingelina isaky ny sombintsombiny avy voankazo voasarimakirana hatrany anaty vatosoa
Ny pros amin'ny Jomtien Beach
Ny tora-pasika dia manana alokaloka voajanahary amin'ny rofia.
Any amoron-dranomasina manontolo dia lalana iray amin'ny hazo rofia sy hazo hafa
Manakaiky ny ivon'ny fotodrafitrasa tsara any Pattaya.
Lehibe ny tora-pasika, manomboka amin'ny vanimpotoana be matetika aza dia malalaka be izany
Tsy mifoka eny amoron-dranomasina
Fampandehanana an-tongotra vaovao mahafinaritra teny amoron-dranomasina.
Tamin'ny taona 2018, niitatra ny morontsiraka.
Any amoron-dranomasina dia misy lalana malaza izay misy an'i Tuk-tuks sy taxi amin'ny be dia be. Ny hoe tonga eto na eto dia tsy olana mihitsy
Mandehandeha amin'ny fivarotana, fivarotana masera, trano fandraisam-bahiny ary condo.
Izay misy tora-pasika sy rano azo atao eto.
Ny fotodrafitrasa amoron-dranomasina Jomtien. vidin'ny
Lehibe ny tora-pasika ary tsy mahazatra ny kalitaon'ny fotodrafitrasa ao aminy. Tsara kokoa raha misy trano fandraisam-bahiny lehibe sy ratsy kokoa noho ny misy azy ireo.
Dobodera, misy ny fandroana, fa eo amin'ny faritra hotely ihany koa.
Soavaly ny masoandro, ny masoandro, ny elo be dia be manerana ny tora-pasika.
100 baht / tontolo andro ho an'ny masoandro milentika
50 baht / tontolo andro ho an'ny masoandro kely
Ao amin'ny fivarotana sy ny vidin'ny kafe dia mifanandrify amin'ny salan'isa ao Pattaya
Toilets sy raraka 10-20 baht
Manomboka amin'ny 2 km miala ao afovoan'i Pattaya ny tora-pasika. Afaka tonga eto ianao amin'ny tuk-tuk, taxi, mandeha an-tongotra, bisikileta manofa (misy fiantsenana maro be eny amoron-dranomasina manontolo)
Misy koa ny seranam-piaramanidina mivezivezy amin'ny morontsiraka Suvarnabhumi
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/RkbPhoLMuvLFNxsY8
Ny fijery amin'ny Pantai Bacco
Ity tora-pasika ity dia nahazo ny anarany avy amin'ny trano fisakafoanana mitovy ny sakafo italiana italiana. Sakafo italiana Bacco italianinaeo amboniny. Ny trano fisakafoanana iray eo an-toerana dia antsoina hoe Glass House (Trano fitaratra).
Ity koa dia hotely lehibe Pinnacle grand jomtien. Ireto ny latabatra café ao ambanin'ny kaontenera, etsy an-daniny koa dia feno tanteraka izy, afaka hitondrana amoron'ny akorandriaka 20 metatra miala ny rano fotsiny ianao. Manaraka izany ny sisin'ny sarin-dàlana, nanomboka tamin'ny volana febroary sy martsa dia nisy rivotra mahery, izay tena ilaina amin'ny fikolokoloana tsara. Ao koa ny sekoly kitesurfing "KiteBoarding Asia KBA«
Ny fotodrafitrasa sy ny toe-javatra eo amoron-dranomasina
Tsy misy foto-drafitrasa toa izany any amoron-dranomasina. Izy io dia torapasika mangatsiaka sy misy mponina.
Mahatratra 1km ny halavany. Ho an'ireo vahiny amin'ny hotely, ireo mpitia fahanginana ihany no tonga eto, vonona amin'ny fepetra Spartan amin'ity tora-pasika ity.
Ny fandriana masoandro sy ny filokana amin'ny masoandro dia tsy hita ao amin'ny Pinnacle Grand Jomtien ihany, ary miaraka amin'ny latabatra dia misy ny mpamangy masoandro miaraka amin'ny elo ao amin'ny trano fisakafoanana ao amin'ny Bacco Beach (Bacco Beach) ary Glass House (Glass House).
Ny loungers ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia natao ho an'ny vahiny onnogo.
Ny sisa amin'ny moron-dranomasina dia tsy misy masoandro, tsy misy alokaloka akaikin'ny sisin'ny rano.
Ny fotodrafitrasa eo amin'ny torolàlana Bakko
Tamin'ny Febroary - Martsa, rivotra mahery no mitsidika ny tora-pasika ary amin'izao fotoana izao dia mazoto indrindra ny sekoly eto kitesurfing.
Ny fidirana ny rano amin'ny rano avo dia mora. tsy malemy fanahy, ary tsy haingana, fa amin'ny fidradradradrana, ny fidirana amin'ny rano dia mivadika ho dobo filomanosana ho an'ny ankizy. Malalaka sy tsy mahazo aina ny olon-dehibe.
Amin'ny vanim-potoana avo, raha tsy misy rivotra, dia madio ny rano eo amoron-dranomasina.
Raha misy rivotra, dia tsy dia mahazatra izany amin'ny andro ambany. dia lasa matevina sy tsy mety mandeha ilay rano.
Vidiny ho an'ny Beach Bacco
Ny fotodrafitrasa dia natao ho an'ny vahiny trano fandraisam-bahiny ihany, amin'ny ambiny tsy misy na inona na inona.
Eo amin'ny lafiny trano fandraisam-bahiny dia misy trano fisotroana kafe misy vidiny mirary.
Aiza ny Bacco Beach (Bacco Beach), ny fomba hahazoana any
Ao amin'ny tanànan'i Pattaya no misy ny valan-tsasatr'i Bakko, ary hita ao amin'ny faritra mangina sy saika mampivadi-po, faritra Na-Jomtien, atsimo amoron-dranomasina Jomtien.
Adiresin'ny trano fisakafoanana anarana mitovy Bacco Beach Italiana fisakafoanana - Na Chom Thian, Distrika Sattahip, Chon Buri 20250, Thailandy
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/DTxFxi1Lx3r2s97s8
Tora-pasika ao amin'ny ambasadin'ny ambasadaoro amoron-dranomasina
Manaraka eo Bakko dia amoron-dranomasina iray hita ao amin'ny faritry ny Ambasadin'i Hotel. Ny ampahany aminy, izay manakaiky ny trano fandraisam-bahiny, dia feno fandroana masoandro izay ao amin'ity orinasa ity. Ny fatiantoka an'ity zona ity dia ny tsy fisian'ny aloka tanteraka. Ny fasika dia misy ny loko mavo, ny akorandriaka dia hita. Ny fidirana amin'ny ranomasina dia mideza.
Fijery momba ny Reniranon'i Ban Amphur
Io tora-pasika io dia manavaka ny halavany sy ny tany efitra. Amin'ny ampahany dia entin'ny mpampita ny masoandro sy ny trano fisotroana kafe. Miaraka amin'i Ban Ampur dia mamelatra ahitra maintso rofia. Tena malalaka io tora-pasika io. Any amin'ny faran'ny lavitra dia maloto be. Na izany aza tsy misy olona ao. Mandritra ny vanim-potoana fizahan-tany, ny rano dia misy loko azure ary mangarahara. Ny fidirana amin'ny ranomasina dia lalina. Amin'ny vanim-potoana ambany dia matetika misy rivotra, no miasa ny ranomasina. Amin'ny rano mikoriana dia mora moka, ka tsy azo milomano, ary ny akorandriaka miaraka amina ranomasina dia atsipy amin'ny tanety.
Any amin'ny 14 km atsimon'ny afovoan'i Pattaya no misy ny morony, ao ambadiky ny renirano kely akaikin'ny vavan'ny renirano kely iray.
Izy dia amoron-dranomasina misy lavaka be 800 metatra ny halavany, manamorona ny lafiny iray miaraka amin'ny sakana milatsaka (any avaratra), ary vatolampy misy vato any atsimo.
Ny sisa amin'ny fotoana tora-pasika azo ekena, fa eo am-pandoany azy. Ny fidirana amin'ny ranomasina dia tena malefaka. Ho an'ny ankizy dia tsara izany fa ho an'ny olon-dehibe kosa dia tsy milamina foana.
Voasary mavo ny fasika ary amin'ny vanim-potoana ambony dia madio tsara. Amin'ny fotoanan'ny orana, akorandriaka marobe maro no entina mankany amoron-dranomasina, ary mila mandeha tsara tsy mitehina ianao.
Madio tsara ny rano amin'ity tora-pasika ity. Farafaharatsiny madio kokoa noho ny afovoan-tanàna ao Pattaya. Ny moron-dranomasina mihitsy, amin'ny maha-fitsipika azy dia tsy feno, fa tsikelikely dia mahazo laza, ary mihamaro ny olona eto.
Averin'i Ban Amphur koa fa misy lakandrano sy elo-trano mihofa. Avy amin'ny fanakorontanana dia tokony ho tsaroana fa ny laharam-baravarana lehibe miaraka amin'ny seil ny masoandro dia somary lavitra ny morontsiraka, ary raha miaraka amin'ny ankizy ianao, dia ho sarotra ny fanaraha-maso azy ireo.
Any amoron-dranomasina dia zaridaina milamina misy rofia tanora eo aminy. Fa mbola feno kely ny hazo palmie raha manome alokaloka tanteraka.
Misy koa trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana miaraka amin'ny haavo vaovao sy vidiny mora.
Amin'ny andro fialantsasatra, ny lanonana miaraka amin'ny sakafo haingana Thai, souvenir ary zavatra kely hafa dia matetika karakarain'ny tora-pasika io.
Amin'ireo plus, ny iray koa dia afaka miantso ny zava-misy fa ny tora-pasika dia manana kianja filalaovana an-jaza tsara miaraka amin'ny swings, slide ary maro hafa. Ary eo ihany koa ny milina fanatanjahan-tena amin'ny rivotra misokatra.
Fandraisana an-trano sy fitaovana fanatanjahantena eo amin'ny tora-pasika Ban Amfur
Betsaka ny fiantsonana maimaimpoana.
Lounger manofa - 100 baht
Seza seza 40 baht
Toilet eo amoron-dranomasina - 5 baht (kalitao mahatsiravina)
Ranon-drano mangatsiaka 10 baht
Avy any Pattaya ny fotsy tuk-tuk fotsy 20 Baht. Atsaharo ny Mail (Paositra)
Aiza izy ity, ahoana ny fomba hahatongavana
Dokotera 20 minitra monja avy any Pattaya, i Ban Amphur Beach. Ny lalana mivantana indrindra dia ny fivoahan'ny Na Jomtien Soi 32 ao Sukhumvit.
Address: Na Chom Thian, Distrika Sattahip, Chon Buri, Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/Red5GLTtTryZ4jdy5
Ny endri-javatra iray hafa amin'ity tora-pasika ity dia tsy lavitra azy, nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, nisy sambo nitondra sambo nitondra 60m lava. (ilay toerana antsoina hoe Hardeep). Ary izao io toerana io no toerana fisakafoanana faran'izay malaza ao Thailand
Lalana ao Sai Kaew "Beach amerikanina"
All about Thailandy. Kitiho eto!
Ny tsara indrindra resorts any Sri Lanka
Desserts sy zava-mamy ao Bali
11.06.2020 / 1 Comment amin'ny The resorts tsara indrindra any Sri Lanka
07.06.2020 / 1 Comment amin'ny Desserts sy ny zava-mamy ao Bali
08.06.2019 / fanehoan-kevitra ao Brezila tsy misy